Khasaaraha Ka Dhashay Gaarigii Shacabka Saarnaa Ee Miinada Kula Qaraxday Inta u Dhaxeysa Afgooye Iyo Balcad – Goobjoog News
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax Miino oo maanta barqadii ka dhacay inta u dhaxeysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo ka kala tirsan gobollada Shabellaha Hoose iyo Shabellaha Dhexe.
Gaari nooca loo yaqaan Homey oo ay saarnaayeen haween ganacsato ah ayaa la xaqiijiyey in miinadan oo dhulka ku aasneyd ay ku qaraxday, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhimasho u badan.
Goob jooge ayaa inoo sheegay in halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof, iyadoo ay jiraan dad gubtay iyo sidoo kale xubnaha qaar kamid ah dadkii gaaarigaasi saarnaa oo laga soo qaaday meello aan ka fogeyn halka qaraxa uu ka dhacay.
Maamulka degmada Balcad ayaa sheegay iney tagi doonaan deegaanka Daniga oo qaraxan uu ka dhacay, waxaana deegaankaasi uu 11-km u jiraa degmada Balcad.
Gaariga Miinada ay ku qaraxday ayaa kasoo ambabaxay sida la sheegay degmada Afgooye, wuxuuna ku wajahnaa degmada Balcad ee gobolka Shabellaha Dhexe.
Madaxweyne Xasan Oo Codsi u Diray QM
Xildhibaannada Baarlamaanka Oo Warbixin Ka Dhageysanaya Guddigooda Difaaca
Vrpbxe agufko Cialis discount buy real cialis online
Fmncrn tnjhdd 50mg viagra cialis canadian pharmacy
Rwfrop fmxxca online pharmacy Xovzf